उद्योगमन्त्रीको गाडीले तेलको लाइन मिच्दा यस्तो बबण्डर | National News | Image Khabar
होमपेज / National News / उद्योगमन्त्रीको गाडीले तेलको लाइन मिच्दा यस्तो बबण्डर
उद्योगमन्त्रीको गाडीले तेलको लाइन मिच्दा यस्तो बबण्डर | Published: January 28, 2016 | बिहीवार 14 माघ, 2072 | 11:25 AM | Viewed: 5037 times
काठमाडौं, माघ १४ । घटना विवरण– बुधबार बिहानको पौने १२ बजेः नयाँ बानेश्वरस्थित थ्री ब्रदर्स पेट्रोलपम्प । बिहानै तीन बजेदेखि नै पेट्रोल भर्न बसेका सवारीसाधनको लामो लाइन ।
एकाएक उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डे चढ्ने झन्डावाला बा.१झ ८२२९ नम्बरको कालो रङको प्राडो हुइँकिँदै आयो । सर्वसाधारणको लाइन मिच्दै आएको प्राडो गाडी सीधै पेट्रोलपम्पभित्र छिर्न खोज्यो । लाइन बसेका सर्वसाधारणले विरोध जनाए । नजिकै रहेका लाइन व्यवस्थापनमा खटिएका प्रहरीले रोक्न खोजे । तर, चालक रोकिने मुडमा देखिएनन् । एक्सिलेटर बेस्सरी थिच्दै जबर्जस्ती भित्र छिर्न खोजे ।
सर्वसाधारणले गरे विरोध– १५ लिटर पेट्रोलका लागि अघिल्लै दिनदेखि गाडी लाइनमा राखेका सर्वसाधारण बुधबार बिहान तीन नबज्दैदेखि पम्प पुगेका थिए । आफूहरूको लाइन मिच्दै हुइँकिएर सीधै पम्पमा छिर्ने मन्त्रीका चालकको हर्कत उनीहरूलाई मन परेन ।
सर्वसाधारणले मन्त्रीको गाडी त्यहाँबाट हटाउनुपर्ने भन्दै निरन्तर हुटिङ गरे । त्यसपछि प्रहरीले जबर्जस्ती नगर्न आग्रह गरे पनि प्राडोका जब्बर चालक टेर्ने पक्षमा देखिएनन् । उनी जबर्जस्ती लाइन मिच्दै अघि बढ्न खोजे ।
चालकको अटेरी हर्कत– लाइन व्यवस्थापनमा खटिएका महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरका प्रहरी निरीक्षक शैलेश न्यौपाने नजिकबाट अटेरी चालकको हर्कत नियालिरहेका थिए । मन्त्रीका चालकले निकै तमासा गरेपछि उनी कारको नजिकै गए र लाइन नमिच्न आग्रह गरे ।
तर, प्रहरी निरीक्षक न्यौपानेको आग्रह चालकले पटक्कै टेरेनन् । उनी जबर्जस्ती अघि बढ्न खोजेपछि भने प्रहरी निरीक्षक न्यौपाने गाडीकै अगाडि पुगेर उभिए । तैपनि उनलाई किचौँलाजस्तै गरी चालकले एक्सिलेटर दबाएर गाडीबाट आवाज निकालिरहेका थिए ।
मन्त्रीलाई फोन लगाएर प्रहरीलाई तर्साउने प्रयास– प्रहरी निरीक्षक सामुन्ने उभिएपछि फुर्तीसाथ छाती फुलाउँदै मन्त्रीका चालक गाडीबाट बाहिर निस्किए । खल्तीबाट मोबाइल फोन झिके र मन्त्री पाण्डेलाई फोन लगाए । प्रहरी निरीक्षक न्यौपानेको नजिक पुगेर हप्काउँदै प्रश्नहरूको वर्षा गरे, ‘यो गाडी कसको हो थाहा छ ? उद्योगमन्त्रीको नाम सुन्नुभएको छैन ? मन्त्रीज्यूको गाडी रोक्ने हिम्मत कहाँबाट आयो ? मन्त्रीको गाडीले पनि सर्वसाधारणले जस्तै लाइन कुरेर तेल हाल्नुपर्छ ?’
अन्तिममा उनले भने, ‘बाटो छोड्नुस् । म तेल हालेर जान्छु ।’ प्रहरी निरीक्षक न्यौपाने अवाक भए । केहीबेर एकोहोरो फलाकेर फेरि गाडीभित्र चढेका चालकले एक्सिलेटर बेस्सरी थिचे र अगाडि बढ्न खोजे । त्यतिवेलासम्म गाडीको वरिपरि सर्वसाधारणको भीड लागिसकेको थियो । उनीहरू मन्त्रीको विरोधमा चर्कै हुटिङ गरिरहेका थिए ।
अन्ततः इन्स्पेक्टरले गाडीबाट थुते चालकलाई– मन्त्रीको धाक लगाएर आफूलाई नै धम्क्याएपछि न्यौपानेले गाडीको ढोका खोलेर कठालो समाउँदै चालकलाई बाहिर निकाले । चाबी थुते र प्रहरी नायब निरीक्षकको जिम्मा लगाएर कार र चालकलाई त्यहाँबाट प्रहरी वृत्त बानेश्वर पठाए । मन्त्रीलाई मोबाइल फोन लगाइरहेका चालक यतिवेलासम्म प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगिसकेका थिए ।
तर, तत्कालै आयो मन्त्रीको दबाब– तर, उनी बानेश्वर वृत्त नपुग्दै मन्त्री पाण्डेको सचिवालयबाट टेलिफोनको घन्टी बजिसकेको थियो । डिएसपी नारायणप्रसाद चिमोरियालाई मन्त्री पाण्डेको सचिवालयले फोन गरेर दबाब दिइसकेको थियो । माथिको दबाब आएपछि डिएसपी चिमोरियाले चालकलाई सामान्य सोधपुछ गरेर केहीबेरपछि गाडीसहित छाडिदिए ।
प्रहरीले भन्यो ? ‘मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ भयो– मन्त्रीका चालकको दादागिरीबारे नयाँ पत्रिकासँगको कुराकानीमा डिएसपी चिमोरियाले प्रहरी र मन्त्रीका चालकबीचको सामान्य असमझदारी (मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ)का कारण घटना भएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले मन्त्रीका चालकले कान नसुन्दा घटना भएको जानकारी दिए । ‘मन्त्री पाण्डेले पहिले पनि सोही पेट्रोलपम्पबाट तेल हाल्ने गरेकाले बुधबार पनि चालकलाई पठाउनुभएको रहेछ,’ डिएसपी चिमोरियाले भने, ‘चालक लाइन नबसी सीधै भित्र जान खोज्दा प्रहरीले रोक्यो । तर, चालकले सुनेनन् । सोधपुछपछि थाहा भयो, चालकले कान नसुन्ने रहेछन् । त्यही भएर थोरै ‘मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ भयो ।’
मन्त्रीका निजी सचिव पदम गैरेले भने घटना सानो भए पनि प्रहरीको गल्तीले ठूलो हुन पुगेको बताए । ‘घटना खास केही होइन । पुलिसको गल्तीले केही ‘मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ भएको हो, तर कुरा मिलिहाल्यो,’ उनले भने । टेकराज थामी, नयाँ पत्रिका दैनिकबाट